Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Ama-hacks wokuhamba we-2022: Isikhathi esihle sokubhuka izindiza namahhotela
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ukuhamba ngesikebhe • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Abantu • Ukuhamba Kwezitimela • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Shopping • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Njengokungaqageli okuhambisana nokuhlala kwesifo esiwubhadane, ukuguquguquka kwezinto kuzohlala kuyinto ephambili kubahambi basekhaya nakwamanye amazwe.
Usuku olufanele lwesonto lokubekisa indiza yiSonto, hhayi uLwesihlanu.
Ngenkathi amazinga okuhlala asekhaya ehle ngo-2020, amanani enyuka kancane kancane kulo nyaka odlule.
Njengoba abahambi beqhubeka nokuhlela uhambo lomgwaqo, imboni ikhombisa usuku oluhle kakhulu lokubekisa ukuqashwa kwezimoto ngoLwesine lohambo lwasekhaya.
Umbiko omusha oveza ama-hacks wokuhamba kulo nyaka, kufaka phakathi isikhathi esihle sokubhuka izindiza, lapho uhambo nezinye izeluleko zokusiza abahambi ukuzulazula ukubhuka iholide ngo-2022, ukhishwe namhlanje.
Ngemuva kwezinyanga eziyi-18 abahambi bamazwe sebeqala ukuphinda bavele, bakulungele ukuhlola umhlaba futhi nokushintsha kokuhlangenwe nakho kwempilo kungakuletha futhi. Ngokombiko, oyedwa kubahambi abane abafuna amathiphu okonga kanye namaphesenti angama-45 akhombisa ukuthi bazimisele ukuguquguquka ngezinhlelo zabo zokuhamba ukonga imali.
Ama-hacks wokubhuka kwezindiza e-2022
Kususelwa kudatha evela ku- I-ARC, amanani entengo amaphakathi (ama-ATP) ekuqaleni kuka-2021 ayesaphakeme kuneminyaka edlule; kodwa-ke, eze ngo-Ephreli kube nokuncipha. Ama-ATP ezindiza zomhlaba wonke nezasekhaya selokhu anda kancane kepha asesilinganisweni cishe ngamaphesenti angama-25 aphansi uma kuqhathaniswa nango-2019.
Iwindi Elifanele Lokubhuka
Amanani endiza yasekhaya ngokuvamile aqala ukukhuphuka ezinsukwini ezingama-35 ngaphambi kokuhamba, kuyilapho amanani ezindiza zomhlaba wonke eqala ukukhuphuka ezinsukwini ezingama-28 ngaphambili. Indawo emnandi yokubhukha indiza yasekhaya iphakathi kwezinsuku ezingama-28 kuya kwezingama-49 ngaphambi kwesikhathi, ngenkathi izindiza zomhlaba wonke kufanele zibhukhelwe izinyanga ezintathu kuya kwezine ngaphambi kwamanani aphansi.
Usuku oluhle lweviki lokubhuka
Usuku olulungele ukubhuka indiza yiSonto, hhayi uLwesihlanu. Ezindizeni zasekhaya lokhu kungonga abahambi cishe amaphesenti ayi-15 kanti ezindizeni zomhlaba wonke ukonga cishe kungamaphesenti ayi-10.
Usuku oluhle lwesonto lokuhamba
Usuku oluhle lokuqala uhambo lwasekhaya nguLwesihlanu hhayi ngoMsombuluko, lapho izihambi zingonga khona cishe amaphesenti angama-25.
Ngezindiza zomhlaba wonke, qala uhambo ngoMgqibelo, hhayi ngoLwesibili ukonga cishe amaphesenti ayi-10.
Inyanga enhle yokuhamba
Abahambi abahlela uhambo lwabo lwango-2022 futhi bangavula ukonga okukhulu ngokuguquguquka nokukhetha inyanga efanele ukuhamba:
Inyanga efanelekile ukusuka ngoJanuwari kuqhathaniswa noDisemba. Ezindizeni zasekhaya lokhu kungonga abahambi cishe amaphesenti ayi-15 futhi cishe amaphesenti angama-30 wokuhamba kwamazwe aphesheya.